Sida loo VRO in MPEG si fudud oo dhaqso
> Resource > Video > Sida loo VRO in MPEG
VRO waa qaab video in duubayaasha DVD isticmaalaan si ay rikoor video ah. Tan iyo files VRO waa adag tahay in la ciyaaro ama wax ka bedel, inta badan isticmaala aad oo ay ku jiraan laga yaabaa jeceshahay inaad ku beddelato VRO in MPEG for loo maqli sahlan ama tafatir. Waxaad isticmaali kartaa Wondershare Video Converter sida aad VRO in MPEG Converter lagu kalsoonaan karo. Waxa kaliya ma ahan kaa caawinaysaa in aad loogu badalo aad VRO duubo files si MPEG format (MPEG-1, MPEG-2, iyo MPEG 4-ka mid ah), laakiin sidoo kale kuu ogolaanaya in aad si toos ah xaalkaa files VRO badan oo qalab video eiting anfacaya, sida abuurka, goynta, qoqobada, biirtay, isagoo intaa ku daray effeccts qabow kala duwan oo music soo jeeda, iwm Cinwaan By jidkii, barnaamijkan weyn oo sidoo kale awood u leh inuu ha aad la ciyaareyso files VRO on qalabka ugu caansan effortlessly.
Next, waxaan inta badan idin ​​bari doonaa sida si loogu badalo VRO in MPEG loo isticmaali. Haddii aad qabto xiiso ogayn hawlaha kale ee shaqo, waxaad riixi kartaa halkan. Hadda, kaliya download, rakibi iyo bilowno VRO in MPEG video Converter weyn, ka dibna raac tilmaan-hoose.
1 dar VRO videos in VRO in ay Converter MPEG
Marka hore, kaydka files VRO on PC. Haddii ay horeba waa on your computer, kaliya furo gal meesha ay ku badbaadi. Dooro files VRO aad rabto, ka dibna kuwaa oo ka soo gal ah in ay leeg- barnaamijkan ee. Haddii kale, aad dhaqaajiso mouse in guji "Add Files" badhanka si ay u helaan files bartilmaameedka oo iyaga soo dhoofsadaan. Hadda, waxaad ka arki kartaa sida ay u muuqdaan doonaa saxaarad item bidix sida thumbnails.
Fiiro gaar ah: Haddii aad doonayso inaad si loogu badalo dhammaan faylasha galay file weyn, aad u baahan tahay si aad u hubiso sanduuqa "midowdo oo dhan videos galay mid ka mid file" waqti xaadirkaan.
2 Dooro MPEG sida qaab wax soo saarka
Waxaad laba hab oo kala duwan si uu u furo qaab saarka daaqadan app ee. Aad mouse u "Qaabka Output" Murayaad barnaamijkan dhaqaaq, ka dibna riix liiska hoos-hoos ama icon qaab image. In ka dib markii suuqa kala qaab wax soo saarka, waxaad tagi kartaa ah "Qaabka" category iyo markaas "Video" subcategory. Hadda, waxa aad ka arki kartaa MPEG-1, MPEG-2, iyo MPEG-4 (ie MP4 Video) halkan. Just dooro mid sida ay baahidaada.
Fiiro gaar ah: Haddii aad doorato qaar ka mid ah qalabka sida qaab wax soo saarka, waxaa loola jeedaa app this badalo doona faylasha aad si haboon qalabka. Sidaas, waxaad ka ciyaari kartaa faylasha aad qalabka aan arin kasta leheyn.
3 Edit aad video files (Ikhtiyaar)
Haddii aad riix "Edit" in bar menu, waxaad geli doonaa suuqa kala tafatirka ay. Halkan, aad u heli kartid mid ka mid ah clip video ah, ballaadhiyo meel kasta oo ka mid ah video ah, dar aad jeceshahay music soo jeeda, dalban saamaynta qabow in video ah, iyo in ka badan.
4 Start VRO in ay diinta ka MPEG
Hit ah "Beddelaan" badhanka si ay u qabtaan VRO in ay diinta ka MPEG. Isla markiiba, app this bilaaban doono diinta faylasha aad la soo bandhigay diinta ka bar horumarka. Inta lagu guda jiro diinta, haddii aad u baahan tahay in la sameeyo shaqooyin kale waqti isku mid ah, waxaad uun ha ordo ee asalka ah.
Ka dib markii diinta, aad dhaqaajiso mouse si fur Folder oo guji ikhtiyaarka. Waxaa aad ka heli kartaa faylasha la gediyay.